Terms uye tsanangudzo - Trading - Libertex
Terms uye tsanangudzo - Trading
musha»Terms uye tsanangudzo - Trading
Terms uye tsanangudzo – Trading
Actual Price ane Quote panguva iyo Company akagadzirira kuitisa Trading Operation pane imwe Point nguva.
Kumbira Price mutengo uko Client anogona kuitisa Trading Operation kutenga imwe Instrument, nokuti Trading zviteshi hunoita kudzidza Trading Operations pamwe Kupararira.
mvumo Person ari munhu wechisikigo kana juridical munhu pamutemo mvumo kushandisa kana kuitisa nezviito chaizvo.
Available mari ndiwo mari kwakaratidzwa muchikamu bhonasi nhoroondo Personal Account Management Portal inogona kuchinjwa kubva bhonasi Account kuti Trading Account uye akabva ashandisa maererano nemitemo isingachinji nokuda Trading Nhoroondo.
musaridzwa ndiyo mari pamusoro Client wacho Trading Account dzakakudzingai Open zvinzvimbo kunoguma; Zvakarurama pamusoro Trading Account kufunga migumisiro yose Closed zvinzvimbo uye Non-Trading Operations.
Base Currency ndiye mari ari Currency Pair riri kutengwa kana kutengeswa nokuda Quote Currency (Counter Currency). Zviri numerator ari Currency Pair (currency rokutanga vaviri).
Bid Price mutengo uko Client anogona tengesa mutengapwe (kutengesa chinhu Instrument), nokuti Trading zviteshi hunoita vachiitisa Trading Operations pamwe Kupararira.
Business Day iri nguva span kubva 06:00 kuti 15:00 GMT ose zuva, kunze kwevhiki uye mazororo. Mashoko azvino uno pamusoro kwevhiki uye mazororo inobudiswa pamusoro Company kuti Website. Inogona zvava nokuda 1 awa munguva yechando uye chirimo nguva kusuduruka.
CFD Instrument chinonzi Instrument nako Trading Operation chiri kuitwa uye iyo yakavakirwa zvimwe pane Chakanaka. An zvinozvikonzera Chakanaka ingasanganisira migove, hazvo, indices, neramangwana uyewo zvimwe zvinhu, zvinhu uye mamiriro ezvinhu maererano pamazita mvumo ne Company. Mashoko pamusoro kuwanda CFD Instruments inobudiswa pamusoro Company wacho Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
Balance Clear Kwayo - dziripo caffeine mari iyo Client haashandisi mu Trading basa. Huwandu Clear Balance Kwayo rinowanikwa nokuda Company maererano nemirau anosimbisa Company. Mashoko pamusoro huwandu Clear Balance Kwayo kunogona raanotaura Personal Account Management Portal uye kana Trading Terminal.
munhu anoda kubetserwa ari dzinongoitika kana juridical munhu anopinda ive Agreement pamwe Company uye inoitisa Trading Operations mukati yechinangwa Agreement uye ayo horokodzwa.
Client kuti Account ndiyo chaiyo nhoroondo iri Personal Account Management Portal aivhurwa Company pakuchengeta mari yacho Client uye kuitisa Trading Operations.
Closed Position Mugumisiro kuurayiwa chikamu Round Trip yechipiri (Trading Operation kuti nokuvhara chinzvimbo).
Company kuti Account iri Company kuti nhoroondo kuitika mune chevanorwara zvemari, nhoroondo (chikwama) mune zvemagetsi mubhadharo mugadziriro uyewo dzimwe nhoroondo kusanganisira nhoroondo Kuripa Agents.
Counter Currency (Quote Currency) ane mari iyo inoshandiswa vachitenga uye vachitengesa Base Currency. Mune Currency Pair Counter Currency inomiririrwa dhinomineta (chechipiri mumwe Currency Pair).
Currency Pair (Forex) ndiyo mbiri mari (Base Currency uye Counter Currency) izvo pa- Trading Operation vane mari zviridzwa. Mashoko pamusoro kuwanda Currency de Pares de Bases rinomiririrwa pasi Company wacho Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
Dealer ari mumwe Company mushandi mvumo ehurumende Quotes, kuongorora kururama Trading Operations of Clients, mubato anonyunyuta uye tsanangura zvokutengeserana ezvinhu chokuita pakuitisa Trading Operations ari Clients 'nyaya.
Nokutendeka chinhu weighted yera mari mari pamusoro Trading Account icho chinoumba mari mari pamusoro Trading Account kusanganisira hadzisi kuzadzika purofiti (kurasikirwa).
kuregedza kushanda ndiyo wazvinenge pamusoro CFD Instrument, Kumisa achitungamirira Trading Operations ane kuitika pane Chakanaka uye kutanga Trading Operations vachiitisa pamwe unotevera. Kuregedza kushanda mazuva nechimwe CFD Instrument anosimbisa Company unilaterally uye vari raanotaura pamusoro Company kuti Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
External Client kuti Account ndiyo nyaya kuitika mune chevanorwara zvemari, nhoroondo (chikwama) mune zvemagetsi mubhadharo mugadziriro.
Fixed Price Execution (Pamusoro chikumbiro) mufananidzo Trading Operations kuurayiwa kana Client iri chokutanga inopiwa pamwe prices zvakananga kuti achiitisa Trading Operation ipapo kana iye inosimbisa ake wake chido kuitisa Trading Operation kuburikidza nekudzvanya nemutengo iri Trading Terminal. Mushure nekudzvanya panguva mutengo kana ari Trading Operation kunosimbiswazve pamusoro Company kuti Server kana Client iri aida kukumbira kuti prices kuti kuitisa Trading Operation zvakare.
mari kushaya hanya ndiko kushaya mari kubva Client wacho Trading Account dzavo tama dzake rwezvemabhengi mashoko kana kuti rwezvemabhengi mashoko ari Client wacho Authorized Person akaratidza kwake kurega chikumbiro.
mukana ndiyo kuchinja nomutengo apo zvinotevera Quote kwakasiyana yapfuura mumwe akawanda (makumi) pamusoro Pips.
Hedging (kiya) kuva maviri Open zvinzvimbo nokuda chete Instrument apo imwe nzvimbo iri refu uye mumwe pfupi.
Initial kumahombekombe (kumahombekombe Zvinodiwa) rubatso kuti kuvhura chinzvimbo. Kumucheto Zvinodiwa Kuti mumwe Instrument anofanira raanotaura pamusoro Company wacho Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
pakarepo Execution mufananidzo Trading Operations kuurayiwa kana Client achida kuitisa Trading Operation kuburikidza nekudzvanya nemutengo iri Trading Terminal. Kana mutengo kuchiri chaiko munhu Trading Operation akatsinhira. Kana Quote iri Trading Terminal haana chaiwo zvakare ari Client iri akabayira mutengo idzva Trading Operation kuurayiwa. An pa kuitisa Trading Operation pa mutengo mutsva chinonzi munguva Limited nguva. The Client vakatenderana kuti zvinobvira Trading Operation kuurayiwa chero Actual Price pamusoro Company wacho Server vanofanira Client kuedza kuitisa Trading Operation kakawanda (hapana zvishoma pane 2 (piri) kuedza mumutsetse) agorambwa Company kuti Server nokuda yekupindurwa Actual Price pamusoro Server.
Financial Chishandiso ari Spot Instrument uye (kana) CFD Instrument. Mashoko pamusoro kuwanda Instruments rinomiririrwa pasi Company wacho Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
zvireruke ndiye reshiyo pakati bhuku rimwe Trading Operation uye uwandu Initial kumahombekombe.
muganhu (Tora Profit) ari mufananidzo riri basa kuti Order kana akadaro Order iri kutengesa nemutengo (mutengo) riri kupfuura ano kumusika mwero kana kuti kutenga panguva mutengo (mutengo) riri kuvatumwa ano musika mwero. Chinangwa chikuru usanyanyoratidza Orders ndiko achisimbisa Trading Operation aurayiwe nemutengo kuti haisi kuipa kupfuura raanotaura Order.
Log File ndiyo chikamu Trading Terminal uye (kana) ari Personal Account Management Portal aida kuti kugadzira (kutsikisa) Data Kutamiswa nokuda Mapato nomumwe munguva kuzadziswa Agreement nomukombiyuta Trading Terminal uye (kana) ari Personal Account Management Portal. Ose kuwana of Agreement Party kuna Trading Terminal kana Personal Account Management Portal anofanira ngadzirambe dziri Log File uye kudzokororwa pamusoro Company kuti Server. The wainyatsotaura servers ndivo huru ruzivo panobva akadikamwa Companies sezvo uchapupu kana tichiongorora disputable ezvinhu chokuita nokuzadzika Agreement ichi. Mashoko kubva Log File of Company kuti Server achava nemhedziso pakutanga pamusoro mamwe mashoko kana kufunga disputable mamiriro ezvinhu kusanganisira pachinhu mashoko kubva Log File pamusoro Client wacho Trading Terminal uye (kana) ari Personal Account Management Portal. The kambani kwakachengetwa kodzero kugadzirisa chokwadi mapindire pakati Agreement Party kusvika Trading Terminal kana Personal Account Management Portal muna Log File.
Long Position kutenga chinhu Instrument pamwe netarisiro kuti mutengo wayo (ukoshi) ichamuka.
Roti ndiko mwero Vhoriyamu ane Instrument pachinhu ine Trading Operation nevamwe. Mumwe Trading Operation chinogona kuitwa anoverengeka mijenya kana zvavo zvikamu. The hukuru mijenya mumwe Instrument uye mhando Trading Terminal anofanira raanotaura pamusoro Company wacho Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
kumahombekombe Level (Nokutendeka Level) ndiye reshiyo pakati Equity uye kumahombekombe Required, akaratidza kuva chikamu.
kumahombekombe Chinodiwa (Reserved Mari, kumahombekombe) ari chaienzana akarwiswa mune Client kuti Trading Account kuramba zvose ake (wake) Open nzvimbo. Kumucheto Zvinodiwa zvakafanira kuti Shamisira nzvimbo nechimwe Instrument vari raanotaura pamusoro Company wacho Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
Market Execution (Actual Price) mufananidzo Trading Operations kuurayiwa kana Client achida kuitisa Trading Operation wakati akabvuma pamberi kuti Trading Operation chichange vaurayiwa nomutengo riri chaiwo pamusoro Company kuti Server (pasina kupa Quotes itsva).
Mid Price ndiwo mutengo pakati Bid uye Bvunza Prices rokuti Client anogona kuitisa Trading Operation mu Trading zviteshi hunoita vachiitisa Trading Operations pasina Kupararira.
Multiplier ndiye reshiyo pakati kutengeserana mari kubva muzana shanduko Libertex chinouraya uye pane Chakanaka mutengo, Base Currency mutengo kubva muzana shanduko. Mashoko azvino uno pamusoro vaifanira hukuru pamusoro Multipliers rimwe Instrument inobudiswa pamusoro Company kuti Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
Non-Trading Operation ndiko kushanda mari kuchinjirwa kune uye (kana) kunyora mari kure kubva Client kuti Trading Account uyewo dzimwe Operations asina chokuita zvakananga ane Trading Operations kuuraya.
Open Position ane chitsama Instrument yakatengwa (kana kutengeswa), kwete kufukidzwa pakatarisana Sale (tenga) zvakafanana Instrument mu zvakaenzana uye (kana) vhorumu; mugumisiro kuurayiwa chikamu round-rwendo tengeserana wokutanga (Trading Operations nechinzvimbo hwomukova). Somugumisiro nokuvhura yepamusoro Client ane kuita kuti) kuitisa inopesana Trading Operation kuvhara nzvimbo chete ukoshi; b) kuramba kumahombekombe Level haidereri kupfuura zvakatangwa Company (nokuti zviteshi vachishandisa pfungwa iyi).
hurongwa (achimirira Order, muganhu, danho) pane zvinodiwa Order ane Client kuti kuitisa Trading Operation kana mamiriro ezvinhu, wakasiyiwa Client ari Client wacho Trading Terminal zvakasangana; zvinonzi kunanga kuti kwakadaro Order inofanira kuurayiwa panguva kutaurwa mune ramangwana maererano Orders nokuurayiwa muitiro inotsanangurwa horokodzwa kuti Agreement ichi. Available Order mhando kuvimba Trading Terminal akasarudzwa Client.
nguva (Pip) ndiyo imwe duku kuchikosha Quote chikwata chiri 0,0001 kana 0,01 zvichienderana Instrument. Kuchinja imwe Quote nokuda 1 (Poshi) chairema muchikwata mudiki zvinoreva shanduko 1 (Poshi) Pip.
Price Feed ari Quotes dzakatevedzana akatumira Trading Terminal kusanganisira Quotes zvose kwakaitwa Company kuti Clients pamusoro zvikumbiro zvavo uye mitengo zvose chaizvoizvo kuitwa Trading Operations.
Quote Currency (Counter Currency) chinhu mari iyo ine mutengo ane Instrument iri denominated. Mune Currency Pair Counter Currency inomiririrwa dhinomineta.
dzokorora ane mutengo rokuti Trading Operation ane Instrument anogona kuitwa.
Quote Mode (kuuraya Type) ndiwo waishandiswa muitiro yokugamuchira (achisimbisa) of kuitika mutengo uye nokuita basa nokuda Client. Available Quote Modes akasiyana zvichienderana mhando Trading zviteshi Nezviridzwa vose vanoumba uye vari raanotaura runoenzanirana horokodzwa kuti Agreement ichi.
akaziva (wakasimba) Financial Result chinhu Financial Result pamusoro Round Trips. Negative Financial Result pamusoro Round Trips ndiko kurasikirwa Client raMwari, yakanaka munhu mari.
Round Trip kunosanganisira maviri zvinopesana Trading Operations pamwe chete vhoriyamu (kuvhura nzvimbo yaro tevera mukuvhara): kutenga pamwe nekutambira kutengesa kana kutengesa pamwe nekutambira kutenga pamusoro nzvimbo pamwe chete Ticket (ID).
Short Position ari kutengesa pamusoro Instrument kutarisira kuti mutengo wayo (ukoshi) uchaburuka.
Spot Instruments vari Currency de Pares de Bases uye simbi izvo kubatanidzwa Trading Operations maererano mitemo gwapa musika. A pamazita Spot Instruments aishandiswa Company raanotaura pamusoro Company kuti Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
waridza ndiwo musiyano pakati Kumbira Price uye Bid Price ane Instrument, anoratidzwa Pips. Kupararira dzingasiyana zvichienderana pamusika mamiriro.
Stop Loss ari mufananidzo basa kuti Client wacho Order Kana kana Order yakadaro iri kutengesa nemutengo (mutengo) riri kuvatumwa ano kumusika mwero kana kuti kutenga nemutengo (mutengo) riri kupfuura ano musika mwero. Chinangwa chikuru pamusoro Stop Orders ndiko kuitisa Trading Operation panguva ano kumusika mutengo pashure mutengo wacho Order kuti zvasvika nomutengo ane Instrument wacho.
Stop-Out ndiwo mutemo unoti pakazovharwa Client wacho chinzvimbo ano pamusika mitengo kana zvinogamuchirika Level zvokurwadza zvasvika. Mitemo fanira pakazovharwa Client wacho zvinzvimbo vanogona siyana zvichienderana kushandiswa Trading Terminal uye zvinotsanangurwa horokodzwa kuti nemitemo Trading Operations.
Regai-Out Level ane uwandu kurasikirwa pamusoro Open Position (nzvimbo) of Client vakaratidza kuva chikamu iri nyaya yokusvika ude fanira pakazovharwa Position (nzvimbo) pedyo Company panguva Actual mutengo pasina vanekodzero ziviso pamusoro Client. Regai-Out Levels nechimwe Trading Terminal vari raanotaura pamusoro Company wacho Website uye akaisa pamusoro Company kuti Server. Kana paine kusiyana mashoko akarongwa pamusoro Company kuti Server achashandiswa.
SWAP ari rollover ane Open Chinzvimbo munhu Client unotevera zuva. The Order uye mashoko SWAP anosimbisa Company nerimwe mhando of Trading Terminal.
gupa chinhu usingashandi yekupindurwa mutengo ane Instrument. Dzinenge tsika Zvikwekwe nokuda Instruments zvose inobudiswa pamusoro Company wacho Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
tikiti (ID) ibhuku rakasiyana kuzivikanwa nhamba kuti Company kodzero kuti ndipe chero nzvimbo akazarura kana Achimirira Order mumwe Client muna Trading Terminal.
Trading Account chinhu chinokosha Client kuti Account ari rekodhi kuchengeta gadziriro yacho Company rakashandiswa nokuda nokuchengeta uchiongorora Non-Trading Operations zvose zvawanikwa, zvokutengeserana zvabuda, Open nzvimbo, Orders nezvimwe zviito uye zvikumbiro ane Client kuti kufunga napo Agreement ichi uye ayo horokodzwa.
Trading Day iri nguva span kubva 21:00:00 kuti 20:59:59 (GMT), kunze kwevhiki uye mazororo. The kuvhura nokuvhara nguva Trading Day inogona zvava nokuda 1 awa munguva yechando uye chirimo nguva iitike. Mashoko azvino uno pamusoro kwevhiki uye mazororo rinomiririrwa pasi Company wacho Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana.
Trading Hours iri nguva span panguva iyo Trading Operations kuurayiwa kana Order placement ive Instrument zvinogoneka. Trading penguva nerimwe Instrument raanotaura pamusoro Company wacho Website uye pamusoro wayo zvokutengeserana servers. Trading Server kuti mashoko kuchatekeshera kana paine kusabvumirana. Munguva Non-Trading Hours Trading Operations kuurayiwa uye Order placement (okunatsiridza) hazvibviri.
Trading Operation ndiko kutendeuka pamusoro-the-pakaunda kushanda pamwe zviridzwa zvemari anoitwa pakati Client uye kambani mune dzisiri deliverable muoti, i.e. kuvhiyiwa sechinoreva kutenga kana kuti kutengesa chinhu Instrument, apo mashoko «kutenga» kana «ikatengesa» vanoonekwa hwokugadzira sokuti hapana kuchinjwa varidzi ane Instrument. Trading Operations zvinoitiswa panguva Company kuti nzvimbo.
Trading Operation Volume ane chitsama Instrument iro riri kutengeswa kana kutengwa mijenya, vamapoka nokuyerwa iri tsamba Instrument kana basa mari iri mari ane Balance (zvichienderana kushandiswa Trading chiteshi).
Trading Terminal riri kushandiswa-software uye Hardware, iyo akwanise Client kuti tinobvumirana Company nomukombiyuta yose kombiyuta pomumbure panyaya zvinokosha mashoko uye zvemupiro Trading Operations akaurayiwa mukati yechinangwa Agreement ichi uyewo kunyora anotenderwa mashoko uye mamiriro, kuisa akadzima Orders. The Trading Terminal unobvumidza kugamuchira mashoko nemari misika yemari dzakawanda, tuma mirayiridzo yacho Company nokugamuchira chairatidza uye mishumo kubva Company. The Trading Terminalshall kupa kuziviswa kwemashoko Mapato (authentication of Mapato) kuti adzikinure mashoko uyewo zvakavanzika uye kuvimbika mashoko achibatsirwa pakuvara zvishandiso cryptographic kudzivirira. The wainyatsotaura Software uye Hardware anogadza zvinosanganisira mashoko uye zvokutengeserana pachikuva Libertex uyewo dzimwe gadziriro pachii kushandiswa ne Company kuti chinangwa Agreement kuuraya.
pane Chakanaka chinokosha riri mujinga ane Instrument uye riri kutengwa kana kutengeswa apo kuitisa Trading Operations. Inotsigira Chakanaka inogona hunomiririrwa mari (Base Currency), mumatanda, hazvo, indices, neramangwana uyewo zvimwe zvinhu, zvinhu uye mamiriro ezvinhu maererano pamazita mvumo ne Company.
hadzisi kuzadzika (zvinoyangarara, mafambiro) Financial Result(Zvinoyangarara Profit / Loss) chinhu Financial Result nokuda Open chinzvimbo mamiriro mitengo yacho Zviridzwa. Negative Financial Result nokuti Open zvinzvimbo riri Floating Loss, yakanaka munhu ari Floating Profit.
WIthdrawal Type ari mumwe mhando Kwayo kushaya hanya inopiwa kune Client yake kana wake Personal Account Management Portal.
Hurukuro Musoro Product Department - LIBERTEX
Trading kuchikuva Libertex